आजका महत्त्वपूर्ण खबर: चोलेन्द्रका संकटा सकिएनन्, कांग्रेसका टाउका मिलेनन्
विरोधका बाबजुत डा. थापा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिमा नियुक्त
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. निरेश थापालाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका छन् । बिहीबार सहकुलपति स्तरको निर्णय गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले अर्को व्यावस्था नभएसम्म थापालाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नियुक्ति दिएका हुन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले २३ कात्तिकमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उपकुलपति डा. मंगल रावललाई कामकाज रोक्न पत्र पठाएका थिए । गत २२ चैतमा उपकुलपतिमा नियुक्त डा. रावलको विषयमा प्रश्न उठेपछि कामकाजमा रोक लगाउन मन्त्री खतिवडाले निर्देशन दिएका थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको उक्त निर्णयप्रति प्रतिष्ठानका ८८ जना चिकित्सक नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् । उक्त निर्णय राजनीतिक दाउपेच रहेको भन्दै तत्काल नसच्चिए संघर्षका कार्यक्रमसहित अगाडि आउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कुमारी बैंकको नक्कली जग्गा धितो प्रकरणमा राष्ट्र बैंकले पनि थाल्यो अनुसन्धान
गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गाको नक्कली लालपुर्जा बनाएर १९ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको घटनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कुमारी बैंकमाथि छानविन थालेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव ढकालका अनुसार ऋण प्रवाहको फाइल झिकाएर अनुसन्धान थालेको हो । ढकालले भने, ‘कुमारी बैंकको यो विषयलाई राष्ट्र बैंकले चासोका साथ हेरेको छ । हाम्रो टोलीले सम्बन्धित क्रेडिट फाइलमाथि छानविन गरिरहेको छ । त्यसको आधारमा बैंकले एक्सन लिन्छ ।’
यद्यपि, एक बैंकका सीईओको दाबीअनुसार, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र कुमारी बैंकका सीईओबीच समेत निकटस्थ सम्बन्धका कारण छानविन निष्पक्ष हुनेमा शंका छ । उसो त यसअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूमा पर्याप्त ऋण प्रवाह गर्ने निक्षेपको आधार नहुँदा नहुँदै पनि ग्राहक बोलाएर ऋण दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एकातर्फ बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिनु र अर्कोतर्फ मिलोमतोमा बैंकहरूले रकम ऋण दिनुले राष्ट्र बैंकको नियमकीय भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपबीचको अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कुमारी बैंकले उक्त प्रवधानलाई लत्याउँदै ९२.१३ प्रतिशत ऋण प्रवाह गरेको छ ।
अमात्यको जग्गाको नक्कली लालपुर्जा बनाएर १९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको घटनाका मुख्य अभियुक्त काठमाडौंका कुसन प्रधान रहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अमात्यको बारा विश्रामपुरस्थित बिरुवा भूमि वनकाली कम्पनीको नाममा रहेको १२ बिघा जग्गा डायनिल कम्पनीको नाममा रहेको नक्कली कागजात बनाएर कुमारी बैंकबाट १९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
बाग्मती प्रदेशमा दुई मन्त्री थपिए
बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले दुई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल आर्थिक मामिला तथा योजना र नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका सचिव निमा लामा स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
जम्कट्टेल पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए । नवनियुक्त दुवै मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष बिहीबार साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसअघि आफू नियुक्त भएलगत्तै गठबन्धनका दलबाट तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
न्यायाधीशहरूले गरे प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलास बहिष्कार, भोलि बारले सर्वोच्चका सबै इजलास बहिष्कार गर्ने
सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशले आज पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले तोकेका बन्दीका मुद्दा भएकाबाहेक सबै इजलास बहिष्कार गरेका छन् । आज प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित १४ जना न्यायाधीशलाई नौवटा इजलासमा १७७ मुद्दा तोकेका थिए । यीमध्ये चारवटा मुद्दा भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका थिए ।
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासमा एउटा, बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा एउटा, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुँडालको इजलासमा एउटा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये न्यायाधीश ढुंगाना र चुँडालको इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाभन्दा अघि सवारी ज्यानसम्बन्धी एउटा मुद्दा चढाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशलाई बिचौलियाको नाइके घोषणा गर्दै अदालत छिर्न नदिने बारको घोषणा
शान्तिपूर्ण प्रर्दशनमा प्रहरी हस्तक्षेप गराएर आन्दोलन कमजोर पार्न खोजेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई बिचौलियाको नाइके घोषणा गरेको छ । बारले हस्तक्षेपको विरोधमा भोलि शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत छिर्न नदिने घोषणा पनि गरेको छ ।
धर्ना बिथोलिएपछि नेपाल बार परिसरमा बोल्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भोलि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न नदिने घोषणा गरे ।
प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने गरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको जानकारी दिएलगत्तै उनले नारा लगाए, ‘बिचौलियाको नाइके ।’ उपस्थित कानुन व्यवसायीले भने, ‘राजीनामा दे ।’ ‘भ्रष्टाचारको नाइके- राजीनामा दे !’ मुद्दाको सुनुवाइ इजलासमा चढेको पेसी सूचीको क्रमसंख्याको आधारमा सुरुदेखि क्रमश: गर्नुपर्ने नियम छ । यो क्रम मिचेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पाइँदैन । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो मात्र एकल इजलासमा छवटा मुद्दा तोकेका थिए । ती सबै मुद्दामा आदेश गरेका छन् ।
पौडेल खेमाले बोलायो आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुअघि नेता पौडेलले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् । बैठक शुक्रबार दिउँसो बस्ने पौडेल निकट केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले बताए ।
पौडेल खेमाले आइतबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो समूहबाट साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुन केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएको जनाएको छ । बिहीबार मात्रै कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफू निकट पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवशेनको तयारीका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गर्न बताइएको छ ।
इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । बिहीबार बिहान भूकम्प गएको जानकारी दिइएको छ । इन्डोनेसियाको पूर्वी प्रान्त पपुवा बारातमा बिहीबार सबेरै भूकम्प गएको हो ।
भूकम्पसम्बन्धी निकायले ६.१ म्याग्नीच्युडको भूकम्प गएको जनाएको छ । ठूलो भूकम्प आए पनि आँधीको खतरा भने नरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । अहिलेसम्म कुनै क्षतिको विवरण पनि नआएको उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय समयअनुसार बिहीबार बिहान ८ः४५ बजेतिर भूकम्प गएको हो ।
५० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाले भारतको चेन्नाई घर भई काठमाडौं महानगरपालिका- ४ बालुवाटार बस्ने ४४ वर्षीय शिवम विरूमुथु चेटियारलाई पक्राउ गरेको हो । उनलाई प्रहरीले गत मंगलबार पक्राउ गरेको महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए ।
इंग्ल्याण्डलाई हराउँदै न्युजिल्याण्ड पहिलो पटक फाइनलमा
न्युजिल्याण्ड पहिलो पटक आईसीसी टी- २० विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । यूएईमा जारी सातौँ संस्करणको टी- २० विश्वकपको पहिलो सेमिफाइनलमा साविक उपविजेता इंग्ल्याण्डलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै न्युजिल्याण्ड फाइनल पुगेको हो । न्युजिल्याण्डले अब उपाधिका लागि पाकिस्तान र अस्ट्रेलियाबीचको विजेतासँग खेल्नेछ ।